इन्टरनेट शब्दावली अभिलेखहरु - 192.168.8.1
वाइफाइ सिग्नल शक्ति जाँच गर्नुहोस् - यदि तपाईंको नेट ढिलो देखिन्छ वा वेब पृष्ठ लोड हुँदैन भने, समस्या तपाईंको Wi-Fi लिंक हुन सक्छ। हुनसक्छ तपाईं उपकरणबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ वा बाक्लो विभाजनहरूले संकेतमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ। केवल तपाईंको Wi-Fi को सही संकेत जाँच गर्नुहोस्।
किन वाइफाइ सिग्नल शक्तिले फरक पार्दछ
वाई-फाईको एक मजबूत संकेतले अधिक भरपर्दो लि indicates्क स .्केत गर्दछ। यो तपाइँ तपाइँ लाई प्राप्त इन्टरनेट गति को पूरा लाभ लिन सक्षम गर्दछ। वाइफाइको स strength्केत क्षमता कारकहरूको दायरामा निर्भर गर्दछ, उदाहरणका लागि कि तपाइँ राउटरबाट कति टाढा हुनुहुन्छ, चाहे यो gh मेगा हर्ज वा २.5 जडान हो, र तपाइँको भित्ताहरूको प्रकार। तपाईं राउटरको नजिक हुनुहुन्छ, सुरक्षित। २.2.4 घगाहट जडानहरू थप प्रसारणको रूपमा, उनीहरूको हस्तक्षेप समस्या हुन सक्छ। बाक्लो सामग्रीले बनेको मोटो पर्खाल (जस्तै क concrete्क्रीट) ले वाइफाइ संकेत रोक्नेछ। एक कमजोर संकेत, यसको सट्टामा, ढिलो गति, ड्रपआउट, र केहि अवस्थाहरूमा पूर्ण रोक्दछ।
प्रत्येक जडान समस्या कमजोर संकेत बलको परिणाम होईन। यदि तपाईंको फोन वा ट्याब्लेटमा शुद्ध ढिलो छ भने, राउटर पुन: शुरू गरेर शुरू गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग यसको लागि पहुँच छ भने। यदि मुद्दा जारी रह्यो भने, निम्न चरणमा सुनिश्चित गर्नु हो कि Wi-Fi मुद्दा हो। ईथरनेट मार्फत लि linked्क भएको उपकरणको साथ इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अझै पनि यदि तपाईंसँग समस्याहरू छन् भने, नेटवर्क समस्या हो। यदि इथरनेट लिंक ठीक छ र राउटर रिसेटले सहायता गरेन भने, यो समय संकेत शक्ति जाँच गर्न समय हो।
एक निर्मित अपरेटिंग प्रणाली उपयोगिता प्रयोग गर्नुहोस्
माइक्रोसफ्ट विन्डोज र अन्य अपरेटिंग प्रणालीहरूमा वायरलेस नेटवर्क जडानहरू निगरानीको लागि बिल्ट-इन युटिलिटी हुन्छ। यो Wi-Fi शक्ति मापन गर्न सब भन्दा चाँडो र सजिलो तरीका हो।
विन्डोजको नयाँ संस्करणहरूमा, तपाईं जडित वायरलेस नेटवर्क हेर्न टास्कबारमा नेटवर्क प्रतिमा चयन गर्नुहोस्। त्यहाँ पाँच बारहरू छन् जसले जडानको सिग्नल शक्ति सूचित गर्दछ, जहाँ एक सबैभन्दा गरीब जडान हो र पाँच उत्तम हो।
एक ट्याबलेटर स्मार्टफोन प्रयोग गर्दै
केहि मोबाइल उपकरण जुन ईन्टरनेट सक्षम छ सेटिंग्समा एक इकाई छ जसले दायरामा वाइफाइ नेटवर्क शक्ति प्रदर्शन गर्दछ। उदाहरण को लागी, एक आईफ़ोन मा, सेटिंग्स अनुप्रयोग मा जानुहोस्, अब वाई-फाई को भ्रमण गर्नुहोस् वाई-फाई नेटवर्क ताकत र तपाईको नेटवर्कको सिग्नल सामर्थ्य मा छ।
तपाईंको वायरलेस एडेप्टरको उपयोगिता प्रोग्राममा जानुहोस्
वायरलेस नेटवर्क हार्डवेयर वा नोटबुक पीसीका केही उत्पादकहरूले सफ्टवेयर अनुप्रयोगहरू प्रस्ताव गर्छन् जसले वायरलेस सिग्नल शक्ति जाँच गर्दछ। त्यस्ता अनुप्रयोगहरूले ० देखि १०० प्रतिशत र अतिरिक्त विवरण हार्डवेयरको लागि विशेष अनुरूपको अनुपातमा आधारित सिग्नल शक्ति र गुणवत्ता सूचित गर्दछ।
वाइफाइ पत्ता लगाउने प्रणाली एक अर्को विकल्प हो
एक वाइफाइ लोकेटि device प्रणाली उपकरणले छिमेकी क्षेत्रमा रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरू जाँच्दछ र वायरलेस पहुँच पोइन्टले नजिकको संकेत बल फेला पार्दछ। सानो हार्डवेयर उपकरणको रूपमा कुञ्जीमा फिट हुने Wi-Fi डिटेक्टर सेक्सिस्ट।
प्राय वाइफाइ लोकेटिating प्रणालीले विन्डोज युटिलिटी जस्ता बारहरूको इकाईहरूमा संकेत शक्ति सुझाव दिन4र LED एलईडी बीचको सेट प्रयोग गर्दछ। माथिका विधिहरू जस्तो छैन, तर वाइफाइ लोकेटि system प्रणाली उपकरणहरूले एक कनेक्शनको शक्ति मापन गर्दैन, तर यसको ठाउँमा, जडानको शक्ति मात्र पूर्वानुमान गर्दछ।
विभाग इन्टर्नेट शब्दावली टिप्पणी छोड्नुहोस्
तपाईंको वाइफाइ नेटवर्क सुरक्षित गर्नुहोस् यो आक्रमणकर्ताहरूलाई राख्न र तपाईंको डाटाको सुरक्षाको लागि आउँदछ।
तपाईंको Wi-Fi नेटवर्क कसरी सुरक्षित गर्ने
लाई तपाईंको Wi-Fi नेटवर्क सुरक्षित गर्नुहोस् यसलाई ह्याकरहरूबाट सुरक्षित राख्दछ, त्यहाँ असंख्य कदमहरू तपाईंले लिनुपर्दछ:
१. पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्तानाम र पासकी बदल्नुहोस्
प्रारम्भिक र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईंले आफ्नो रक्षा गर्न के गर्नै पर्छ वाइफाइ नेटवर्कले डिफॉल्ट प्रयोगकर्तानाम र पासवर्डलाई थप सुरक्षित गरिएकोमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ।
वाइफाइ आपूर्तिकर्ता नेटवर्क को लागी एक उपयोगकर्ता नाम र पासकी स्वचालित रूपमा तोक्छ र ह्याकर्स बस यो पूर्वनिर्धारित पासकी अनलाइन पाउन सक्दछन्। यदि तिनीहरूले नेटवर्कमा पहुँच प्राप्त गरे भने, तिनीहरूले पासकीलाई उनीहरूले चाहेको जस्तो परिवर्तन गर्न सक्दछन्, विक्रेतालाई लक गर्नुहोस् र नेटवर्क लिनुहोस्।
प्रयोगकर्तानाम र पासवर्डहरू प्रतिस्थापन गर्दा आक्रमणकर्ताहरूले यसको Wi-Fi को खोज्नको लागि र नेटवर्कमा पहुँच प्राप्त गर्न अतिरिक्त जटिल बनाउँदछ। ह्याकरहरूसँग सयौं सम्भावित पासकी र प्रयोगकर्ता नाम समूहहरू परीक्षण गर्न उच्च-टेक ग्याजेटहरू छन्, त्यसैले यसलाई शक्तिशाली डिकोड गर्न सजिलो बनाउन प्रतीक, अक्षर, र संख्याहरू संयोजन गर्ने शक्तिशाली पासवर्ड चयन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
२. वायरलेस ईन्क्रिप्शन नेटवर्क खोल्नुहोस्
एन्क्रिप्शन तपाईको नेटवर्क डेटा सुरक्षित गर्न को लागी एक सबैभन्दा प्रभावी तरीका हो। एन्क्रिप्शनले तपाईंको डाटा वा सन्देश सामग्रीहरू मिक्स गरेर काम गर्दछ ताकि यसलाई ह्याकरहरू डिकोड गर्न सक्दैन।
A. भर्चुअल निजी नेटवर्क VPN प्रयोग गर्दै
भर्चुअल निजी नेटवर्क एक नेटवर्क हो जसले तपाइँलाई व्यक्तिगत तरीकाले अननक्रिप्टेड, असुरक्षित नेटवर्कमा जडान गर्न अनुमति दिन्छ। एक VPN ले तपाइँको लगतलाई गुप्तिकरण गर्दछ ताकि एक हैकरले तपाइँ के अनलाइन वा तपाइँ अवस्थित छन् जहाँ संचार गर्न सक्दैन। डेस्कटपको अतिरिक्त, यो ल्यापटप, फोन वा ट्याब्लेटमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। डेस्कटपको साथसाथै यो फोन, ल्यापटप, वा ट्याब्लेटमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Home. घरमा नहुँदा Wi-Fi नेटवर्क बन्द गर्नुहोस्
यो सजिलो देखिन्छ तर तपाइँको घर सञ्जाललाई आक्रमणबाट जोगाउने सब भन्दा साधारण तरिका मध्ये यो स्विच अफ गर्नु हो जब तपाईं घरबाट टाढा हुनुहुन्छ। तपाईको वाइफाइ नेटवर्कले दिनको २ hours घण्टा, हप्ताको days दिन काम गर्नुपर्दैन। तपाईं घरबाट टाढा हुँदा तपाईंको वाइफाइ स्विच गर्दा तपाईंको घरबाट टाढा रहदा संसाधन ह्याकर्सको सञ्जालमा पुग्ने सम्भावनाहरू कम हुन्छ।
The. राउटर सफ्टवेयर अपडेट राख्नुहोस्
वाइफाइ सफ्टवेयर नेटवर्क सुरक्षा लाई सुरक्षित गर्न आधुनिकीकरण गर्न अनिवार्य छ। कुनै पनि अन्य प्रकारको सफ्टवेयर जस्ता राउटरहरूको फर्मवेयरहरूमा एक्सपोजरहरू हुन सक्छ जुन ह्याकरहरू शोषण गर्न उत्सुक छन्। धेरै राउटरहरूमा स्वत: अपडेटको विकल्प हुँदैन त्यसैले तपाईको नेटवर्क सुरक्षित छ भनेर निश्चित गर्न तपाईले शारीरिक रूपमा सफ्टवेयर अपडेट गर्नु पर्छ।
Fire. फायरवालहरू प्रयोग गर्नुहोस्
अधिकतम डब्ल्यू-फाई राउटरहरूमा एक अंतर्निहित नेटवर्क फायरवाल हुन्छ जसले ब्रॉडब्यान्ड नेटवर्कहरूको सुरक्षा गर्छ र स्टकरहरूबाट कुनै नेटवर्क आक्रमण जाँच गर्दछ। तिनीहरूसँग रोक्नको लागि विकल्प पनि हुन्छ त्यसैले यो जाँच गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको राउटरको फायरवाल तपाईंको सुरक्षामा सुरक्षा थप्नको लागि थप गरिएको छ।
MA. म्याक ठेगानाको फिल्टरिmit अनुमति
धेरै जसो ब्रॉडबैंड राउटरहरूले एक मिडिया फिजिकल एक्सेस कन्ट्रोल नियन्त्रण (MAC) ठेगाना भनेर चिनिन्छ। यसले नेटवर्कमा लिंक गर्न सक्ने ग्याजेटहरूको संख्या जाँच गरेर सुरक्षा बढाउन खोज्दछ।
सुस्त इन्टरनेट जडानसँग सामना गर्न शीर्ष methods विधाहरू
त्यहाँ एक उत्कृष्ट Wi-Fi वा ईथरनेट लिंक हुनु भन्दा बढी कष्टकर अरू केहि छैन ढिलो इन्टरनेट गति। तल समस्याहरूको समाधान गर्न केही विचारहरू छन्, सहि, केवल एक ढिलो इन्टरनेट गति पार गर्न।
१. तपाईको इन्टर्नेट योजना जाँच गर्नुहोस्
कहिलेकाँही, तपाईंको इन्टरनेट जडान ढिलो छ किनकि तपाईं क्राइपी ईन्टरनेटको लागि भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाइँको प्रदायकको वेबसाइटमा लग ईन गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् तपाइँसँग के छ। अब द्रुत.कमान वा कुनै अन्य वैकल्पिक साइटहरू भ्रमण गर्नुहोस् र एक द्रुत परीक्षण गर्दछ। तपाईंको इन्टरनेटको गति बढाउने उत्तम तरिका भनेको तपाईंको योजना अपग्रेड गर्नु हो।
२. तपाईको हार्डवेयरलाई युनिभर्सल फिक्स दिनुहोस्
तपाईंको राउटर र मोडेम जाँच गर्नुहोस् र छिटो रिसेट गर्नुहोस् र निरीक्षण गर्नुहोस् यदि त्यसले काम गर्दछ भने। तपाईंको घरको अन्य पीसीहरू निरीक्षण गर्नुहोस् यदि तिनीहरूको हो भने निरीक्षण गर्न इन्टरनेट ढिलो छ। यदि मुद्दा एक पीसीमा मात्र देखा पर्दछ, मुद्दा त्यो पीसी हो, तपाईंको मोडेम वा राउटर होईन।
Your. तपाईको वाइफाइ सिग्नलहरू ठीक गर्नुहोस्
Wi-Fi को कुरा गर्दै, तपाईं आफ्नो इन्टरनेट र राउटर ठीक छ भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ; अझै तपाईंको वायरलेस स sign्केतहरू कमजोर छन्। यो पहिले-ढिलो उत्पादन गर्न सक्दछ - वा कममा, एक dormancy भरिएको ब्राउजि experience अनुभव। त्यसोभए, तपाइँलाई केहि टेक्निकहरूको साथ तपाईंको राउटरलाई सार्न, ट्वीक गर्न, र बढावा दिन आवश्यक पर्दछ।
Switch. स्विच अफ वा ब्यान्डविथ-होगिंग अनुप्रयोगहरू प्रतिबन्ध
यदि हार्डवेयर कार्य क्रममा देखिन्छ भने, अवलोकन गर्नुहोस् यदि कुनै थप प्रोग्रामहरू जडानमा प्रभुत्व जमाउँदैछन्। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ BitTorrent को साथ फाईलहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ, सामान्य वेब ब्राउजि slow ढिलो हुनेछ। तपाईले एक्स्टेन्सनहरू स्थापना गर्न को लागी प्रयास गर्नु पर्छ जस्तै गोपनीयता ब्याजर र एडबलक प्लस जसले ब्यान्डविथ-प्रभावशाली विज्ञापनहरू, भिडियोहरू र एनिमेसनहरू रोक्दछ, जुन तपाईंको जडान उपभोग गर्दछ।
A. भर्खरको DNS सर्भर प्रयोग गर्नुहोस्
जब तपाईं ब्राउजरमा ठेगाना लेख्नुहुन्छ, तपाईंको पीसीले DNS को रूपमा ज्ञात गर्दछ पीसी-उत्तरदायी आईपी ठेगानामा खोजी र व्याख्या गर्नको लागि। कहिलेकाँही, यद्यपि, तपाईंको पीसी प्रयोग गर्ने सर्भरहरूमा त्यो जानकारीको समस्या हुन सक्छ वा पूर्ण रूपमा तल जान्छ। भाग्यवस, तपाईंसँग धेरै छिटो, नि: शुल्क विकल्पहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै क्लाउड फ्लेर वा गुगल डीएनएस।
Your. तपाईको इन्टर्नेट आपूर्तिकर्तालाई सम्पर्क गर्नुहोस्
यदि तपाईंले सबै आवश्यक समस्या निवारण चरणहरू पार गर्नुभएको छ र तपाईंको इन्टर्नेट अझै सुस्त छ भने, त्यसोभए समय आयो भने तपाईंको इन्टर्नेट आपूर्तिकर्तालाई सम्पर्क गर्नुहोस् र समस्या अन्त भएमा अवलोकन गर्नुहोस्। नोट: केवल अनुमान नगर्नुहोस् कि तिनीहरूले केहि गलत गरेका छन् र तपाईंको ग्राहक सेवा प्रतिनिधिलाई सम्मान गर्दछन्। तपाईंले निश्चित रूपमा ठूलो नतिजा प्राप्त गर्नुहुनेछ यदि उनीहरूले तपाईंलाई यी सब भइरहेको बेला गलत गति प्रदान गरेको छ।
सुस्त जडानको लागि वेब सुधार गर्नुहोस्
समस्या निवारण ढिलो इन्टरनेटले केहि समय लिन सक्दछ, र बीचमा तपाईंलाई अझै ब्राउजिंग आवश्यक पर्दछ। वा हुनसक्छ तपाईं क्याफेमा वा फ्लाइटमा हुनुहुन्छ, र त्यहाँ तपाईं केहि गर्न सक्नुहुन्न धीमा गतिमा। त्यसकारण ढिलो कनेक्शनको लागि तपाइँको वेबलाई बढावा दिन यो समय हो।
यदि तपाईंले ढिलो जडानमा काम पूरा गर्नुपर्दछ भने, तपाईंले इन्टरनेट सुपरफास्ट भएको भन्दा फरक कार्यहरू चयन गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाईका कार्यहरूलाई ब्यान्डविथ-प्रकाशको साथ साथै ब्यान्डविथ-भारीहरूमा पनि विभाजन गर्नुहोस्। जब तपाईं सुस्त जडानमा हुनुहुन्छ उज्यालोलाई प्राप्त गर्नुहोस् र सबै ब्यान्डविथ-भारी कार्यहरू संयुक्त रूपमा संकलन गर्नुहोस् ताकि एक पटक तपाईं छिटो जडान प्राप्त गरेपछि तपाईंले ती कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ।